DEG-DEG: Xiddig Ka Tirsan Liverpool Oo Heshiis La Gaadhay Koox Ingiriis Ah - GOOL24.NET
DEG-DEG: Xiddig Ka Tirsan Liverpool Oo Heshiis La Gaadhay Koox Ingiriis Ah
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa sii sagootinaysa mid ka mid ah xiddigihii ay ku aflaxday ee sida weyn u caawiyey xilli ciyaareedkii hore markii ay ku jireen dhibaatada badan ee ay dersin ciyaartoyda ahi ka dhaawacnaayeen.
Liverpool ayaa la sheegayaa inay dhawr ciyaartoy ka tegayaan saacadaha kooban ee ka hadhsan waqtiga uu xidhmayo suuqa iibka ciyaartoyda, waxaana ka mid ah Divock Origi oo qandaraaskiisu ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedkan iyo Minamino oo isagana ay boos la’aani ku haysano Anfield.
Hase yeeshee waxa jira ciyaartoy kale oo hadda heshiiskiisa ay Liverpool ogolaatay oo u wareegaya kooxda heerka labaad uga dhacday Premier League ee Bournemouth, taas oo diyaarinaysa safarka iyo fududaynta sidii uu kusoo gaadhi lahaa difaaca Liverpool ee Nat Phillips.
24 jirkan difaaca dhexe ah oo kasoo laabtay dhaawac uu ku maqnaa tan iyo bishii December ayaa tijaabada caafimaadka u maraya Bourmemouth oo uu amaah ugu ciyaari doono illaa dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Fabrizio Romano ayaa xaqiijiyey in labada kooxood ay isla meel-dhigeen heshiiska Nat Phillips, sidoo kalena ay Bournemouth heshiis shaqsi ah la gaadhay difaacan oo ogolaaday inuu kasoo ciyaaro heerka labaad maadaama aanu boos joogto ah ku haysanin Anfield oo ay fursadihiisu yar yihiin.